လာလည်ကြသူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေသော်...
Posted by အောင်2comments at 5:38:00 PM
စိတ် .." စေတသိတ် " ၏ အစွမ်းသတ္တိ....
လူ တွေမှာ ရုပ် ကိုယ်ခန္ဓာထက် စိတ် ဆိုတဲ့ အရာက အရင်ဆုံးဦးဆောင်လှုပ်ရှားပါတယ်...အဲဒီလို စတင်ဦးဆောင်တဲ့ စိတ် ( Mind ) ကို နောက်က ကပ်ပါလာတဲ့ စေတသိတ် ဆိုတဲ့ နာမ် လေးက စိတ် အား အကောင်း အဆိုး စေ့ဆော်တိုက်တွန်းပေးနေပါတယ်....မကောင်းတဲ့ စေတသိတ် က မကောင်းတဲ့ စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကောင်းတဲ့ စေတသိတ် ကလေးကတော့ ကောင်းတဲ့ စိတ် ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်....
စေတသိတ် ဆိုတာကြီးက အလျား၊ အနံ၊ ရုပ်ဒြပ်၊ အစိုင် အခဲ၊ အမှုန် အ၀ါး၊ အလုံး အတုံး၊ အရည် အဖတ် ဘာမှမရှိဘူး ( ရှာလို့မရပါဘူး ).....ဒါပေမဲ့ စိတ် ကို ဖြစ်စေတာက သူပါပဲ.... ဘာမှ အကောင်အထည် ပြမရပေမဲ့ အကျိုးပေးတဲ့ အစွမ်းသတ္တိ အပြည့်ရှိပါတယ်...( မီး မှာ ပူ တဲ့ သတ္တိ ၊ ရေခဲမှာ အေးတဲ့ သတ္တိ ၊ သံပုရာသီး မှာ ချဉ်တဲ့ သတ္တိ ရှိသလိုပေါ့ )...အစွမ်းသတ္တိ ရှိလို့လည်း လူ တွေမှာ အကောင်း အဆိုး အကျိုးပေးမတူကြတာပေါ့.. " စိတ်... သည် အရာရာကိုဦးဆောင်၏။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ကောင်းသော စိတ် အကြံဖြင့် ပြောသောစကား၊ ပြုသော စကား၊ အလုပ် တို့ကြောင့် ထိုသူ၏နောက်သို့ ( အရိပ်သည် အစဉ်လိုက်ဘိသကဲ့သို့ ) သုခ ( ချမ်းသာခြင်း ) သည် အစဉ်လိုက်လေ၏ "
Posted by အောင် at 10:59:00 PM
ဘယ်အချိန် အထိ ရှည်ကြာမလဲ။
စွဲမက်ကာ တွယ်ဖက်အသက်တွေ ဆက်ခဲ့ကြတာ....
အတ္တ၊ လောဘ နဲ့ ဒေါသဘ၀ဟာ
အလကားမေတ္တာ တရားကို ပစ်ခွာကာထား
အရှုံးကို အရှုံးလို့ မမြင်နိုင
်ဒဏ်ရာ အမာရွတ်နဲ့ ဘ၀ကို နေတတ်ခဲ့
ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာတောင် လက်တစ်လုံးခြား
ငါ့ဖို့သာ မကျန်ရင် ဘာမှ စိတ်မ၀င်စား
ငါ့အူမ တောင့်တတာ ပြဿနာ
ခက်တာတွေက ရက်တွေ ကြာခဲ့ပြီ
ပြက္ခဒိန်တွေသာ အရွက်ရွက် စုတ်ခဲ့
ပုပ်အက်တဲ့ နေ့ရက်တွေနဲ့ ပဲ
သတိတရ ထကြည့်မှလက်ပြချိန် ရောက်ခဲ့ရပြီ။
Posted by အောင် 1 comments at 7:37:00 PM
လက်ရှိဖြစ်နေသော လူ့ ဘ၀ကိုဆန်းစစ်သုံးသပ်ဝေဖန်ခြင်း......
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ရှိလူ့ဘ၀ဆိုတာကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်..လူ့ဘ၀ ဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာကို ဆရာတော်ကြီးများအသီးသီးဟောကြားတော်မူအပ်သည့် ၀ိပသနာတရားများ နှင့် ပဠိစ္စသမုပ္ပသံသရာ စက်ဝန်း
အကြောင်း လေ့လာနားထောင်ကြစေလိုပါတယ်.... ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိရထားတဲ့ လူ့ဘ၀ ကိုဆန်းစစ်
သုံးသပ်ပါမယ်....... အမိဝမ်းထဲကစ သန္ဓေတည်လာပြီး မွေးဖွားလာကြပြီးတဲ့နောက် လူဘ၀ရဲ့ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်
အတိုင်း မိဘရိပ်မှာနားခိုရင်း အတတ်ပညာတွေ၊ အသိပညာတွေ သင်ကြ၊ ပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများနှင့် သွားကြ လာကြ၊ ခေါ်ကြ ပြောကြ၊ စားကြ သောက်ကြ၊ ရီကြ မောကြ၊ ဆွေးကြ လွမ်းကြ၊ ၀မ်းနည်းကြ ပူဆွေးကြ၊
၀မ်းသာစရာရှိက၀မ်းသာလိုက်ကြ..... ဒီလိုနဲ့ လူဘ၀ ကြီးကိုတနေကုန်၍ တနေထွက်ဖြင့် ဖြတ်သန်းလာကြရပါ
တယ်..ဒီလိုဖြတ်သန်းလာကြရာမှာ အချိန်ဆိုတာကြီးက လူဘ၀ကို စောင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..သူ့သဘာဝအတိုင်းကုန်ဆုံးနေတာပါ.......
အချိန်ဆိုတာကြီးက သူ့သဘာဝ အတိုင်းလုပ်နေသလို လူ့ဘ၀ ဆိုတာကလည်း
တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာ သတိလက်လွတ်မေ့နေကြတယ်မဟုတ်လားဗျာ.. ရက်တွေမှ.. လတွေ...လတွေမှ..နှစ်တွေ..ကုန်းခန်းလာတယ်နော်..ဒီလိုကုန်ခန်းလာတဲ့ အချိန်နှင့်အတူ ပစ္စုပ္ပန်ဟာ အတိတ်ဖြစ်သွား..အနာဂတ်ဟာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လာလိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ.. မနက်မိုးလင်းလာ.. မျက်နှာသစ်.. စားလိုက်ကြ လုပ်လုပ်လိုက်ကြ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒေါသထွက်လိုက်ကြ ဆဲကြ ဆူကြ အလိုမကြလိုက်ကြ အဆင်ပြေစရာရှိလည်းပြေလိုက်ကြနဲ့ တနေကုန်ပြန်သွားပါလေရော..ဒီလိုတနေကုန်အတွင်း ကိုယ်နှုတ် နှလုံး သုံးပါးစလုံး နဲ့ လုပ်လိုက်ကြတဲ့ အရာတွေဟာ ကောင်းတာပါသလို မကောင်းတာတွေလည်း ပါနေပါတယ်နော်......ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နေ့ ရောက်..ဒီလိုပဲ လူဘ၀လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ နဲ့အချိန်ကုန်သွားပြန်ရော..တခါ..နောက်တနေ့ ရောက်..ဒီလိုနဲ့ ပဲ လူ့ဘ၀ကြီးကို ကုန်ဆုံးသွားကြတော့မှာလားဗျာ...ဒီလို လုပ်လိုက် ကိုင်လိုက် စားလိုက် သောက်လိုက် အ်ိပ်လိုက် မိုးလင်းလိုက်နဲ့ ကုန်နေတဲ့ အချိန်နဲ့အတူ ဘ၀ဆိုတာကလည်း ဒီအတိုင်းသွားနေမှာပဲလို့ ထင်နေကြသလား......ညအိပ်ရာဝင်ရင် နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး တစ်ချက်ကလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါ....အခုဆိုရင် လူ ဘ၀ကြီးမှာ အပြီးသတ်ကုဘို့ဆေးမရှိသေးတဲ့ ရောဂါ ဘယတွေကလည်းများမှများပဲ ( ဆီးချို သွေးချို၊ သွေးတိုးလေငန်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ အိပ်ဂ်ျအိုင်ဗီ၊ ကင်ဆာ၊ တီဘီ၊ အသည်းရောင်အသည်းဝါအေ၊ ဘီ ) ...နောက်တစ်နေ့မှာ သေချာရှိနေမယ်လို့ ထင်သလား ? မင်းသိင်္ခ စံဇာဏီဘို ကွန်ပျုတာနက္ခတ်ဗေဒင် ဘယ် ဗေဒင်နက္ခတ်ဆရာမှ အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူး..တစ်နေကုန်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ် နှုတ် နှလုံး သုံးပါးစလုံးရဲ့ အလုပ်တွေဟာ ကောင်းတာတွေချည်းပဲလို့ ယူဆနေသလား ? ဆက်လျှောက်ရအုံးမဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အနာဂတ် ဘ၀ အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသလဲ ? ဘယ်အရာတွေက မြဲတာ ရှိသလဲ ? ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ကိုရော နည်းနည်းလေးသတိမရဘူးလား ? ဘုရားရှိခိုးပါတယ် ဆိုရင် ပြည့်စုံသွားပြီလို့ ထင်သလား ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? အထက်ပါစာစုလေးကိုဖတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ......... ကိုအောင်သူ
Posted by အောင်0comments at 12:05:00 AM
အနိုင်၊ အရှုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး.........
အနိုင်အရှုံးဆိုတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေတွက်ပြီး အငြင်းပွားနေကြရင် ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။ စည်းလုံးရေး ပျက် ပြားခဲ့တဲ့ သာဓကတွေလည်း အများအပြား ရှိခဲ့ဘူးကြပါပြီ။ နိုင်သူမှာလည်း နိုင်လို့ ရတက်မီးတွေပွား၊ ရှုံးသူမှာလည်း ဒုက္ခတွေများ၊ ဒီတော့ အနိုင်အရှုံးဆိုတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရလိုမှုကို ဦးတည်ရင်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရဘို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
Posted by အောင်2comments at 5:17:00 AM Links to this post
ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓ...Our Buddha ( ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ပါ )
ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာ..ဗုဒ္ဓလည်းမဟုတ်၊ ယေရှုလည်း၊ ကွမ်ရင်မယ်တော်လည်းမဟုတ်၊
ထို့ကြောင့်တည်း...ဗုဒ္ဓကဆိုခဲ့သည် သူဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ် မိမိလုပ်သမျှ ကာယ၊ ၀စီ၊
တနည်းဆိုသော်အလုပ်ကိုဆိုလိုခြင်း သာတည်း...ထီမထိုးပဲ ထီပေါက်ချင်သည့် သူသည်စောက်ရှုးပင်ဖြစ်၏..
ဒါဟာ လောကုတ္တရာ ဓမ္မ.. ယနေ့ခေတ် အနာဂတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်သူလဲ ?
Posted by အောင် at 10:39:00 PM Links to this post
ပစ္စုပ္ပန်ကောင်းရင်..အနာဂတ်ကောင်းမယ်...If you've nice present, will be nice future
- ပစ္စုပ္ပန်မှာ လက်လွတ်ကာ..........နစ်နာဆုံးရှုံးရ
- နောင်ရေးကိုတွေး စိတ်မအေး.....ပူဆွေးအားငယ်ရ
- ပစ္စုပ္ပန်မှာ သတိပါ...................နောင်ခါစိတ်အေးရ။
( အရှင် သီရိန္ဒာဘိဝံသ )
Posted by အောင် at 10:37:00 PM Links to this post
လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင် မတုန်မလှုပ်သီးခံ နိုင်တာ စိုးရိမ်ပူဆွေး သောက မဖြစ်တာ ကို မင်္ဂလာ အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ထုတ်ဖေါ် ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ လောကဓံတရား ရှစ်ပါးဆိုတာက လာဘ်ရခြင်း၊ အခြွေအရံများခြင်း၊ အခြွေအရံနည်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုကတော့ အကောင်းလောကဓံ ကြုံတွေ့ရင် တပြုံးပြုံးနှင့် ရှိတတ်ပြီး အဆိုးလောကဓံ နှင့် ကြုံတွေ့ချိန်မှာ တငိုငိုတရယ်ရယ် ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလောကဓံမျိုးနှင့် ကြုံလာ ကြုံလာ မတုန်မလှုပ်သီးခံ နိုင်ဖို့ အတွက် မိမိစိတ်ကို ကိုလေ့ကျင့်ထားရပါတယ်။ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရပါတယ်။
သမထ ကမ္မဌာန်း နှင့် ၀ိပဿနာ ကမ္မဌာန်း ဟု ကမ္မဌာန်း ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ပုဂ္ဂိုလ် စရိုက် အားလျော်စွာ သမထကမ္မဌာန်း အမျိုးအစား ၄၀ ဟောထားပေးပါတယ်။ အာနာပါန နုဿတိ ကမ္မဌာန်း က လူသိများထင်ရှားပါတယ်။
သမာဓိ ရင့်လာသည်နှင့်အမျှ စိတ်တည်ငြိမ်လာမယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာ အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်တယ်။ အရှိကို အရှိအတိုင်းမြင်နိုင်ရင် အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံလာနိုင်မယ်။
ကာလာမသုတ်တော်မှာ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ရှောင်ကြည်ပါ။
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါဟု လမ်းညွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတော်အရ ပညာရှိ ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့ဒီဂရီ အတန်းပညာမဟုတ်။ အောက်ထစ်ဆုံး ကံ ကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်သော သမ္မာဒိဌိ ဥာဏ်ပညာမှ အစပြု၍ ကိလေသာကိုအမြစ်သတ်ပါယ်သတ်နိုင်သော အရဟတ္တမင်္ဂညာဏ် ဖိုလ်ညာဏ် ရှိသူကိုိ ပညာရှိဟု ဆိုရသည်။ နတ္ထိလောကေ အနိန္ဒိတော အကဲ့အရဲ့လွတ်သောသူ မည်သည်လောကမှာမရှိ။
ဘုရားရင်ကိုယ်တောင်တိုင်မှ အကဲ့ရဲ့ မလွတ်၊ လောကဓံ မှမလွတ်နိုင်သေးလျှင် သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မူ အဘယ်မှာ ဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါအံ့နည်း။
အားကစားသမား တစ်ယောက် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်အောင် ပုံမုန် လေ့ကျင့်ခန်း ယူရသလို လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံတွေ့ချိန်မှာ မတုန်မလှုပ် သီးခံနိုင်အောင် ၀မ်းသာခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်းပြင်းစွာမဖြစ်အောင် စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြပါစို့ဟုတိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
( အရှင်ကုမာရ )
Posted by အောင် 1 comments at 10:36:00 PM Links to this post
ယခင်ရန်ကုန်....( Long Long ago Yangon, Myanmar )
Posted by အောင် at 10:23:00 PM
ယခုရန်ကုန်... ( Today Developmental Yangon, Myanmar )
၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၂၆ ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ည၏သာယာရှုမငြီးဖွယ်ရွှေတိဂုံ၊ ဆူးလေ နှင့် ကန်တော်ကြီးကရ၀ိတ်
Posted by အောင် at 10:19:00 PM Links to this post
Developmental Yangon City View, Myanmar
Posted by အောင် at 10:18:00 PM Links to this post
လှပသည့်မြို့တော်သစ် ( Nay Pyi Taw City, Myanmar )
Posted by အောင် at 8:51:00 PM Links to this post
ကျွန်တော့် ဘလော့၏ ရည်ရွယ်ချက်
ကျွန်တော် ဒီဘလော့ဆိုဒ် ကလေးကို ရေးရတဲ့
လူမှုကိစ္စတွေနဲ့ ပဲ နပန်းလုံးနေကြရတော့..
အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုး၊ရခဲလှတဲ့ လူ့ ဘ၀ ရဲ့ တန်ဖိုးကို
ကြောင့်ကျွန်တော့် post တွေမှာ ဘ၀အတွက်
ကျွန်တော်ဆိုတာလူထဲက လူသား တစ်ယောက်ပေါ့.... ကျွန်တော်ကအညာသားပါ.... ဒီ blog ကိုရေးဖြစ်ပုံကတော့ သူများတွေ တစ် blog ထဲ blog နေကြတော့ ကျွန်တော်လည်းအားကျမခံ blog လိုက်ရတာပါပဲ.
အချိန်ဆိုတာ ဖန်ဆင်းရှင်လူငယ်များအတွက် ကြည့်ရုံသက်သက်မဟုတ်... Apply the time if you wanna improve
ထွန်းထွန်းလှိုင် ( ဗုဒ္ဓ တရားတော်များ )သာကီနွယ်ပန်းခရေိုဇော်မိုးအောင်ညီလင်းဆက်မောင်လှရဲ့ဒိုင်ယာရီမြန်ပြည်ချစ်သား
အရှင်ဇ၀န ( ရွှေပြည်သာ ) ၏
" United we stand, divided we fall " နွားကွဲက ကျားဆွဲမည်
There are 8 Major National Ethnic Races in Myanmar